Siddeed Ku Noqoni Kartaa Qof Caqli Badan? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Horta Adigu Yaad Tahey?|Tukesomalism
Hibo Ciise, May 22, 2016
Dhibaatooyinka Ay Leedahay Qabyaalada -Q. 3aad
Muslimo Cabdullaahi, July 29, 2018
Cabdijabaar Sh. Axmed — June 24, 2016
Caqli badnaanto waxay leedahay awood wax lagu barto wali sidda ugu fudud inaad wax ku barani karto. Caqli badnaantu waxaad ka faa’ideysaa qaabka ugu wanaagsan ee aad u samaysani karto go’aamo wanaagsan. Caqli badnaantu waxay leedahay awoodda lagu xaliyo dhibaatooyinkaada. Ogaaw marwalbo waad kordhini kartaa heerka caqligaada.
Si caqligaada u kordho waxaad u baahantahay inaad sameyso ficilo qaas ah oo faa’ido weyn kuu leh. Ficiladda caqliga lagu kordhiyo waxaan dhihi karaa waxay ka koobanyihiin waxyaabo aad u tiro badan balse waxaan isleeyahay qeybahaan waa qeybaha ugu wanaagsan, qofkana uu samayni karo dhammaan fciladaas oo dhan, waa Shan waxyaabood oo kor loogu qaadi karo heerka caqligaada.
Diinta islaamku waxaa ay muhiimad weyn siisaa aqoonta iyo kasbashadeeda. Aayadii ugu horeysey ee quraanka kariimka, waxaa ay ahayd mid rasuulkeena (NNKH) lagu amray inuu wax akhriyo. Ilaahay subxaanu watacaalaa waxaa uu yiri. “ akhri” adigoo kaashanaaya magaca rabbigga ku abuuray. ( suurada Iqra, aayada 1.aad). Suuradaan waxaa kaloo uu ilaahay ku magacaabay oo ku xusay mid ka mid ah aaladaha loo adeegsado aqoonta iyo tacliinta kaas oo ah “ Qalinka”. Ilaahay waxaa kale oo Rasuulka (NNKH) ku amray inuu rabbiggiisa ka baryo in aqoontiisu kor u kacdo.
Raadinta aqoontu waa waajib, waana qodob meel sare kaga xusan diinta islaamka. Horumarka wadan iyo ilbaxnimada aadamiga waxaa ay ku xiran yihiin hadba awooda ay dadku u leeyihiin iney wax akhriyaan. Sidaas darteed waxaa jira xiriir weyn oo ka dhexeeya akhriska, kasbashada aqoonta iyo kobcitaanka maskaxda iyo maanka. Maanka qofku waa sida muruqaha oo kale, waxaana uu u baahan yahay tababar joogto ah. Qofku kolka uu doonaayo in murqihiisa caadiga ahi dhismaan, waxaa uu layliyaa ama tababaraa jirkiisa. Jirka ayaa la siiyaa tababar joogto ah si murquhu u dhismaan, si fiicna ugu shaqeeyaan.
Layliga murquhu waxaa kale oo uu keenaa iney murqaha u sahlanaato qaadashada hawada ogsijiinta iyo weliba wereega dhiiga oo hagaaga. Haddii laba qof tartamaan waxaa markiiba badinaaya qofka jirkiisu qaadan jirey tababar joogto ah maxaa yeelay qofkaas xubnihiisa jirka ayaa ah kuwo horay loo diyaariyey oo ka bixi kara cadaadiska la saaray.
Balse qofka aan tababarka qabin waxaa uu noqonayaa mid markiiba si sahlan u daala, sababtuna waxaa weeye dhamaan xubnaha iyo unugyada jirka ayaan ahayn kuwo diyaar u ah iney tartan galaan oo cadaadis la saaro. Halkaas waxaa ka cad in jirku u baahan yahay tababar joogto ah si uu si wanaagsan ugu shaqeeyo. Arinktaasi waa midda keenta in dad badani si joogto ah u tagaan meelaha lagu tababarto ee jirka lagu dhiso. Haddaba si la mid ah sida jirku ugu baahan yahay tababar ayaa maskaxda iyo maanka qofkuna ugu baahan yahay carbin iyo tababar joogto ah. Tababarka maanka iyo maskaxdu waa wax akhriska, taas oo loola jeedo in qofku caadeysto inuu si joogto ah wax u akhriyo.
Ku Dadaal Inaad Kor u Qaado Isku Xernaanta Maskaxdaada
Mala socotaa maskaxda maroodiga waxay seddax laab ka weyntahay maskaxda bini’aadamka. Balse maxaa keenay in maskaxda bini’aadamka ay ka caqli badnaato maskaxda maroodiga? Sawabtoo ah bini’aadamka maskaxdiisa wuu isticmalaa marwalbo. Bini’aadamka wuxuu bartaa waxyaabaha adag sidda xisaabta, koorsooyinka goobaha waxbarashada iyo waxyaabaha sidda hal xiraalaha iyo Games-ka. Crossword-ka ee aad ku arkayso jaraa’idka waa waxyaabaha dhiso caqliga bini’aadamka ee ku dadaal dhammaan waxyaabaha dhisi karo maskaxdaada. Marwalbo aad ayay u fiicantahay inaad maskaxdaada tababar u sameyso si aad ulla qabsani karto go’aamada degdega ah iyo caqabadaha nolosha.
Ogaanshaha waxyaabaha cusub waa shey muhiim u ah nolosheena. Dunida aynu ku dhaqanahay ma aha mid taagan balse waa mid mar walba uu ku yimaado isbedel. Waxyaalo horay u jirey ayaa dunida ka dhamaanaaya, waxaana soo kordhaaya waxyaalo cusub oo aan horay loo aqoon. Tusaalahaas waxay kuu fududeynayaa inaad wax badan ka ogaatid dunida kugu wareegsan.
Raac Ama La saaxib Dadka Caqli Badan
Xeel-dheerayaasha cilmiga bulshada iyo cilmi nafsiguna waxa ay mar kasta qofka kula taliyaan in uu yeesho saaxiibo kala duwan, oo wadar ahaan iyo waaxid ahaanba uu ula kulmo, sheeko wadaag iyo iskaashina ula leeyahay.
Marwalbo oo aad la saaxibto dad caqli badan waxaa suurta gal ah inaad ku dabadayato oo aad wax badan ka barato qaabka ay u fakiraan. Arrintaan ayaa ah arrin kuu saamaxayso inaad noqoto qof caqli badan. Hadaba waxaa jira dhaqamo ay iska ilaaliyaan dadka caqliga badan si ay noloshooda ugu khasaarin taasina waxay mudantahay kudayasho
Cuntada Waxay Saamaysaa Waxqabadka Maskaxda
Cuntada uu qofku qaato ayaa si toos ah saamayn ugu leh hawlqabadka maskaxda. Sidaas awgeed waxaad awood u leedahay doorashada cuntada saxda ee korin karta awoodda maskaxadaada, taasi oo si weyn u caawinaysa xusuusta maskaxda iyyo hawlqabadkeeda.
Cunto dheelitiran ayaa ah tan lagula taliyo dadka, waxase jira cuntooyin si gaar ah waxtar ugu leh shaqada maskaxada kuwaasi oo loo yaqaano cuntada maskaxada. Kuwni waa ku ugu fiican dhinaca maskaxada waxaana ka mid aha:
Kaluunka: Shaki kuma jiro inuu kaluunku yahay mid aad faa’iido badan u leh, maxaa yeelay wax ku badan acid Omega iyo saliida kaluunka oo ah cuntooyinka ugu muhiimsan ee dhinac maskaxda. Kaluunka laftiisa ayaa usii kala wanagaasan dhinac maskaxada waxa ugu fiican noocyada : Salmon, Saradine, Tuna, Herring, Mackerel iyo Ansjos.
Khudaarta iyo Miraha: Khudaarta iyo midhaha ayaa iyana ah mid waxtar weyn u leh dhinac shaqada maskaxada . Waxaana ugu fiican khudrada noocayad Canabka, daba case, Mooska, Canbaha, tufaaxa, tamaandhada iwm.
Biyaha: 80% ka mid ah maskaxda wuxuu ka kooban yahay biyo, sidaa awgeed haddii aad biyo bada cabto waxay dhiirgleinaysa shaqada maskaxda, waxa kale ay ka caawinaysa kana hortgeysa in masaxada qaliin lagaga sameeyo. waxaana ay dhakaahtiirtu cilmi baadhistaan smayyay ku taliyeen in ugu yaraan aad maalintii cabto laba litir oo biyo ah.
Shukulaatada: Rumayso ama ha rumaysan, waxa cad in shukulaatadu laga sameeyay midhah digritu ay wax badan u ka qayb qaadato hawsah maskaxad. cilmi-baaris ayaa lagu ogaaday in shukulaatada, gaar ahaan , tan a mku badan tahay maadada “Alflavanol” ay wanaajiso socodka dhiigga ee goobaha muhiimka ah ee maskaxda. Waxaan afiican in la qaato laba saacadood ama saddex ka dib cunista , sidaa darteed waxaa lagu talinayay in la cuno shaklaydhka.
Kafeyga (Coffee): Mala socotaa Kafeyga inay ku jirta maadada loo yaqaano Caffeine ay ku kordhiso awwooda maskaxda waxaana laga helaa fir-fircooni dheeraad leh, waxay jirka ka dhigtaa jir firfircoon, waxayna arrintaas kaa saacideysaa inaad noqoto shaqsi u diyaar ah inuu qabto shaqada ama waxbarashada. Halkii koob oo kafey ah wuxuu kaa caawinayaa inaad isticmaasho awwood dhammaystiran ee maskaxdaada.
Sii Hawo Badan Maskaxdaada
Markaad leedahay jadwal jimicsi ama aad si joogte ah u jimicsatid waxa ku kordhaya awoodada iska caabineed ee dhinaca xanuunada. Duri iyo xanuunada la mid ah si fudud kugu dhici maayo. Jimicsigu wuxu kordhiyaa waxa loo yaqaano immunoglobulin, immunoglobulinku waa protein kor u qaada difaaca jidhka. Markaad jimicsanayso waxaad u neefsataa si fiican, si aad si fiican ugu neefsato waxaad u baahantahay inaad jimicsiga jirkaada aad joogtayso, waxaadna ka helaysaa inaad ka hesho hawo badan ee maskaxdaada. Arriintaasna waxay ku dhaxalsiisaa inaad noqoto shaqsi maskaxdiisa shaqeynayso oo fir-fircoon marwalbo waana sawabta ay dad badan u jecelyihiin inay sii wadaan jimicsiga joogtada ah.
Caqliga Illaahay s.w.c ayaa bixiyo asiga ayaana qofka ugu deeqo, caqliga qofna wuu ku dhashaa qofna wuxuu ka qaadaa noloshiisa sidda ay u kalla duwaneed. Dad badan ayaa aminsan in nolosha dhibaatada badan ay caqli badan tahay marka loo eego midda aan dhibaatada aanan soo marin, waxaas oo dhan waxbo kama jiraan. Haa waan ogalahay in qofka dhibaatada soo maro waayo arag noqonaayo balse qofka cilmiga iyo aqqoonta la deris ah qaasatan markuu shaqsiga yahay qof wax aqriso asigoon dhibaato soo marin ayuu in badan fahmi karaa nolosha ku heeraarsan wax ay tahay iyo halka ay ka timaaday.
Tags: Siddeed Ku Noqoni Kartaa Qof Caqli Badan? |Tukesomalism.com
Next post Masiibada Mirqaanka|Tukesomalism.com
Previous post Calaamadaha Khatarta Ah Ee Waqtiga Uurka |Tukesomalism.com
March 2, 2018 at 3:44 am	— Reply
aaad buu ii cajab galisay duruuursatni runyii